Ndi sayensi Belarusia ichoputa ihe ndi mmadu na achoghi emebi Haishu
Ullọ ebu Pulp
Igbe dị iche iche na windo
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ na iji ahihia
Ihe ngosi nkwuputa ọkachamara na USA na Europe
Ndi sayensi Belarusia ichoputa ihe ndi mmadu nwere ike imebi
MINSK, 25 Mee (BelTA) - National Academy of Sciences nke Belarus bu n’obi ime ụfọdụ ọrụ R&D iji chọpụta teknụzụ kacha nwee nkwenye, gburugburu ebe obibi na nke akụ na ụba maka ịme ihe ndị a na - eme biodegrad na nchịkọta ha, BelTA mụtara n’aka ndị Belarusian eke Mịnịsta na Minista nchekwa gburugburu ebe obibi Aleksandr Korbut n’oge mba ụwa na sayensị sayensị. ogbako Sakharov Ọgụgụ 2020: Nsogbu gburugburu ebe obibi nke narị afọ nke 21.
Dị ka onye ozi ahụ si kwuo, mmetọ ikuku bụ otu n'ime nsogbu ndị metụtara gburugburu ebe obibi. Ntinye ihe mkpofu ahihia na-etolite kwa afọ n'ihi mmụba obibi ndụ yana nrụpụta na-abawanye na -emepụta na oriri nke ngwaahịa plastic. Ndị Belarus na-emepụta ihe dị ka ton 280,000 nke ihe mkpofu plastik kwa afọ ma ọ bụ 29.4kg n'isi obodo. Ibelata ahihia na-eme mkpo ihe ruru 140,000 nke ngụkọta (14.7kg n'otu mkpụrụ).
Ndị otu kansụl ahụ kpebiri mkpebi na 13 Jenụwarị 2020 iji nye ikike ịme ihe maka iwepu ngwungwu plastik wee jiri dochie gburugburu ahụ. Resourceslọ ọrụ na-ahụ maka akụ na ụba na gburugburu ebe obibi na-ahụ maka ịhazi ọrụ ahụ.
A ga-amachibido iji ụdị ngwaahịa plastik diski disable na Belarusia na-ahụ maka nri ọha dịka site na 1 Jenụwarị 2021. Otutu iwu nke gọọmentị iji kwado mmanye a na-eme ka ihe mmekorita nke gburugburu ebe obibi, gụnyere nkwakọ akụ na-adịghị njọ. Belarus ebidogozigharị usoro iwu kọmishọnik na nchịkọta dị mma. A na-achọ usoro ọzọ maka dochie ngwongwo plastik na iwebata teknụzụ ndị na-ekwe nkwa.
Na mgbakwunye, a nabatara usoro dị iche iche dịka mkpalite akụ na ụba iji gbaa ndị na-emepụta ihe na ndị na-ekesa akwụkwọ ahụ aka, na-ahọrọ mbadamba gburugburu ebe obibi maka ngwaahịa ha.
N’ọnwa Mach n’afọ a, ọtụtụ mba na ụlọ ọrụ European Union (EU) na ụlọ ọrụ na-anọchite anya akụkụ dị iche iche nke mpaghara plastik Europe gbara mbọ belata nsị plastik, jiri plastik na-erughị ngwaahịa, yana tugharia ọzọ.
Oge nzipu ozi: Jun-29-2020